Ulwazi lwamalaphu oboya [athini amalaphu asekhaya omzi-mveliso wempahla yoboya]
Amalaphu oboya anokohlulwa abe ngamalaphu oboya ngomlinganiselo othile kunye nawo onke amalaphu oboya.Makhe sazise ngokufutshane ingqiqo eqhelekileyo yamalaphu oboya aziwa ngabavelisi beejezi zeegusha!Uboya bekhemikhali boboya befayibha njengelaphu: Uboya bepolyester njengelaphu: ubukhulu becala bonakele, bunobuso obugudileyo kunye ...
Uveliswa njani umsonto wecashmere?[umsonto wekheshmere osetyenziswa ngabavelisi bejezi ye cashmere]
Umsonto weCashmere wenziwa ngecashmere ngokwenkqubo yokuveliswa kwelaphu elineenkcukacha kunye nomgangatho ongqongqo wolawulo kunye nenkqubo yolawulo.Yimathiriyeli ekrwada eyimfuneko kumzi-mveliso wokulungisa i sweatshi ye cashmere.Umsonto weCashmere wohlulwe waba yilaphu yecashmere yokunxiba iimpahla ezinithiweyo kunye necashmere elukiweyo ...
Umzi-mveliso we sweatshi: Amacebiso okucoca i sweatshi (amacebiso okubuyisela ukushwabana)
Iingcebiso zokucoca ijezi yoboya ① Okokuqala, unokongeza iviniga kumanzi ashushu kwaye ufunxe ijezi, kuba iviniga emhlophe ayinakunqanda kuphela ijezi ukuba ifudumale, kodwa ikwanesiphumo sokuvala inzala.Ukongeza, isicoci esingathathi hlangothi nesithambileyo siya kunyulwa...
Unokukhetha njani ijezi elungileyo ye-cashmere?Ukufumana njani ukwenziwa ngokwezifiso kwefektri yejezi ye-cashmere?
Malunga nekheshmere Yintoni ijezi yekheshmere?Andiyenzi ingcaciso.Ukuba unomdla, ungaya kuGoogle.Makhe ndichaze ngokufutshane ukuba "i-Cashmere" ye "sweater ye-cashmere" ibhekisela kumaleko amancinci oboya phantsi kweenwele ezinde zangaphandle kwi-goa ...
Ngowuphi umenzi wejezi yoboya olungileyo?
Kuluntu lwangoku, iijezi zoboya ezenziwe ngokwezifiso ziye zaba ngumkhwa, kwaye ukwenza ngokwezifiso kwahlukile kwiimpahla zemveli ezenziweyo kwaye ziqaqambisa iimpawu zomntu.Kumashishini, iijezi zoboya ezenziwe ngokwezifiso zinokuqaqambisa ngcono umfanekiso wenkampani, ukuze zisebenze...
Ukukhetha imathiriyeli ye sweatshi (ukhetho lwelaphu le sweatshi)
Into yokuqala ekufuneka uyiqwalasele xa ulungelelanisa iijezi zoboya ngamalaphu.Iimpawu zeempahla ezahlukeneyo zihlukile.Ukuba ufuna ukwenza ibhetshi yeejezi zoboya ezingabizi kakhulu, kufuneka uqale uqonde iimpawu zeempahla ezahlukeneyo.Ukukhetha imathiriyeli ye sweatshi (swe...
Ukunitha inkqubo ngokufutshane yazisa imveliso yokunitha kuwe
Ukongeza ekuthungeni amalaphu angwevu ahlukeneyo, ukusika kunye nokuthunga kwiimpahla ezinithiweyo ezahlukeneyo, ukunitha kunokudibanisa ngokuthe ngqo iimveliso ezenziwe kumatshini ukwenza iimveliso ezenziwe ngokupheleleyo okanye ezingaphelelanga.Inkqubo yokubumba inokugcina imathiriyeli ekrwada, ukwenza lula okanye ukurhoxisa ukusika kunye nokuthunga...
Abavelisi be sweatshi baseTshayina: ixabiso lesiseko sokuvelisa i sweatshi elinithiweyo lineenzuzo
Ndisuka kumzi-mveliso.Ndiyakwazi ukusebenzisana nawe ngokuthe ngqo Umgangatho olungileyo kunye nexabiso eliphantsi Zininzi izitayile Umzi-mveliso ukubonelela ngokuthe ngqo Gcina ingxaki Isiqhamo esinempazamo Mhlawumbi yintsebenziswano ngonaphakade kunye nobutyebi bobomi bonke Abavelisi beejezi baseTshayina: zithini ijezi...
Ngaba ijezi inokunxitywa ecaleni kwesikhumba?Ingaba ijezi inxitywa kufutshane nesikhumba?
Iijezi zoboya ziimpahla abanazo abantu abaninzi kule mihla, kodwa abanye abantu bayathanda ukuzinxiba kufutshane nesikhumba sabo, kwaye abanye abantu bayathanda ukunxiba idyasi yasekwindla. Ngezantsi u-xin Jie Jia xiaobian ukukuxelela malunga neejezi ze-cashmere zinokunxitywa kufutshane nomzimba. ?Ingaba ijezi inxitywa kufutshane nesikhumba?C...
Ngaba iijezi zoboya ziya kuphela?Ijezi yoboya izakuphela indlela yokuphatha?
Ijezi yoboya ngoku ininzi kakhulu yabantu abafana nempahla, banxiba kakuhle kakhulu, kwaye ubushushu bulungile ngokukodwa, abuyi kujongeka budumbile. Ezantsi kwe-xin Jie Jia xiaobian ukukuxelela malunga nejezi yoboya iza kuphela?Ingaba iijezi zoboya ziya kuphela Uboya...
Iijezi zoboya zenziwe njani ukuze ziodolwe?
Akukho lula kumashishini ukuba abe neejezi ezihambelana nenkcubeko yeshishini labo.Kuba ezinye izinto kufuneka zithathelwe ingqalelo izinto ezininzi, kuphela ishishini kunye nabasebenzi abacingayo, ukuze benze iijezi ezikumgangatho ophezulu ngokuhambelana nenkcubeko yeshishini. Ke, xa amashishini athengisa ...
Kubo bonke abathengi
Kubo bonke abathengi, enkosi ngokuqhagamshelana nathi eWonderfulgold.Nceda uqaphele ulwazi olubalulekileyo oluchazwe kweli nqaku.Inkampani yethu ivulwa ngo-8.30am – 6.00pm ngoMvulo ukuya ngoMgqibelo, ngaphandle kweeholide zikawonke-wonke, kwaye iya kujolisa ukuphendula kuzo zonke ii-imeyile kwiintsuku ezi-3 zokusebenza.Ukuba umbuzo wakho ulapha...